Microsoft Windows 11 ... neLinux kernel? | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft Windows 11… ine Linux kernel?
Kupenga chaiko, handiti? Musoro wacho unotoita kunge jee, asi wakataurwa nemumwe munhu asingawanzo taura zvisina maturo uye anoziva indasitiri iyi zvakanaka. Muchokwadi, aive munhu mumwechete akandiudza kuti Linus Torvalds aizodzoka mushure mekumira kwenguva pfupi kuraira kweLinux muLinux vhezheni 4.20 uye akadaro. Mushure mekuzivisa kernel vhezheni 4.19, Torvalds akatora zvakare chirongwa chake zvakare. Ndiri kureva Steven J. Vaughan-Nichols, kune avo vasingazive ...
Uye zvino akatsunga chimwe chinhu chakasimba senge iyi nhau. Zvichava zvakanaka zvakare? Ichokwadi ndechekuti ichokwadi kana kuti kwete, idzi nhau dzinoda kuti dzakawanda dzive zvakafanana sezvo dzaizovhundutsa vamwe vazhinji. Asi izvo zvinotevera Windows 11 yakavakirwa pane iyo Linux kernel Panzvimbo peMicrosoft NT Windows kernel, ingave nhau dzinotyisa kupfuura Richard Stallman achipa hurukuro kuMicrosoft office.
Steven anobva pane izvo iyo yakawanda Windows 10 matambudziko mauri unenge usingade kuvandudza vane dambudziko rakaomarara rekugadzirisa. Kuburitswa kwakawanda kweWindows 10 kwaunza kubva kumatambudziko anodzivirira mamwe makomputa kutanga, mamwe maratidziro anosiya kubatana kweWiFi kusingashandisike, imwe yakabvisa mafaera pasina mvumo yako kubva kune mamwe maforodha, uye yakareba nezvimwe, izvo zvinoita kunge zvisingamire.
Nezuro pandakanzwa idzi nhau ndanga ndichiseka neshamwari yangu kuti Linux ichauya kuzogadzirisa matambudziko eMicrosoft Windows here kana kuti Microsoft ichauya kuzoparadza Linux. Asi hatisi kuita zvekutambaNgatiendei kune zvakataurwa naSteven kuti afunge izvozvo. Iye anofunga kuti atarisana nematambudziko akakomba seaya ari Windows 10, matanho ekupererwa anogona kudikanwa. Izvi zvingave zvakanaka kune iyo Linux nyika? Ini ndinopokana pachokwadi, uye ini ndingafarire kuti zvese zvirambe zvakadaro, nekuti zvinogona kutungamira kumazhinji distros mapurojekiti ...
Steven akatamba nepfungwa iyi kwemakore mazhinji, asi ikozvino anoita kunge ari kuitora zvakanyanya nekuda kwezviitiko zvichangobva kuitika. Kune vashandisi paizove pasina shanduko, iyo inotevera Windows ingadai isina shanduko, kunze kwekuti kernel inofambisa zvese ichave iri Linux kwete NT. Izvi zvaizoreva kuti rese software yemuno inomhanya paLinux. Asi pachezvangu ndinoona matambudziko akati wandei neizvi, kune rumwe rutivi kuti zvingangoita kuti hakuna akadaro Windows 11 nekuda kwenzira yazvino yekuvandudza sekuburitsa-kuburitsa kubva kuMicrosoft.
Kune rimwe divi, kutakura zvese software yekumhanya paLinux chingave chiito chine hutsinye. Kunyangwe kune izvo, Steven anoti kune mamwe mapurojekiti epamberi kwazvo. Izvo zvinoenderana nenyaya yekuti WSL (Windows Subsystem Linux) yatovepo, uye zvakare mapurojekiti akaita seWine uye kumwe kuitiswa kwakadai seCrossOver uye Valve Proton yeSteam. Izvo zvatova neakawanda "akashandurwa" masisitimu mafoni kana syscalls kushanda paLinux.
Parizvino, mapurojekiti senge iwo ataurwa haashande zvachose akanaka nekuti Microsoft ine kodhi yakavharwa yeAPI yayo uye havana basa rakazara. Asi kana Microsoft ikapa michina yakaita seWine isipo, inenge iine zvazvinotora ku "girisa" uye kuita kuti software yemuno ishande sedumwa. Izvi kune rimwe divi zvinogona kubatsira zvinowirirana neGNU / Linux nekuda kwezvaizopa, asi zvakare zvinoparadza kana ikakwanisa kutora pfungwa dzevashandisi vava kumhanyisa GNU / Linux distro.
Chero nzira, ichi hachisi parizvino ichokwadi. Uye kunyangwe Linux iri inonyanya kushandiswa mu Microsoft Azure chikuva, uye kunyangwe ivo vakavhura yakawanda kodhi, vakaburitsa mamwe maturusi eLinux, vakatenga GitHub, vakapa kodhi kuLinux kernel, uye vari nhengo dzeLinux Foundation, m ndisina chokwadi kana ramangwana rikaenda kunze uko kana kuti kumberi iro ramangwana riri mugore ...
Ungade here kuona Windows X ine Linux kernel? Usakanganwa kusiya zvaunotaura nezvako zvaunofunga ... ndinodzokorora izvo, kunyange zvichiratidzika kunge kubudirira kweLinux mune yakasarudzika desktop desktop, inogona kuve nemhedzisiro. Unoyeuka here EEA (Gumbatira, Wedzera uye Dzima)? Kuchenjera! Ini ndato taura chimwe chinhu chakafanana mu chinyorwa nezveye exFAT kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Windows » Microsoft Windows 11… ine Linux kernel?
Ini ndinofunga chete bhenefiti yataizowana yaizove kuvandudzwa kune vatyairi veNvidia ...
Kune vamwe vese, matambudziko mazhinji aigona kuenda kuGNU / Linux
Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti Satya Nadella's Microsoft haina kufanana naBill Gates. Muchokwadi, iyo yakasara Steve Ballmer yaive isisipo.
Microsoft yakamira kuve kambani yechigadzirwa kuti ive kambani yebasa. Chaizvoizvo kubva kune ese masevhisi. Nhasi unogona kubhadhara iyo WIndows (yemakambani) rezinesi ine kunyoreswa kwemwedzi pamwe chete neMicrosoft Office. Izvo zvavanofarira kuve nemakambani anobhadhara iyo Office 365, Microsoft Teams uye Azure quota uye vanogadzira vanoshandisa maturusi avo kugadzira maficha akadai seGitHub uye Visual Studio.
Ini handifunge kuti kuve nekodhi kodhi yekushandisa kunodhura kuiisa kuLinux. Muchokwadi, ivo vanogona kutora iyo OpenOffice base kodhi (iyo LibreOffice imwe yavanotadza nekuda kwezvikonzero zvekupa marezinesi) chinja chinongedzo, chiite kuti chienderane nemafomati eMicrosoft voisa Microsoft Office 2020 pairi.
Ini handina ruzivo rwehunyanzvi rwekuti ndizive kana kukwidziridzwa kune Linux kernel kwaizonetsa, asi paive neLinux zviyero zvakaiswa kubva kuWindows application saka ndinofungidzira kuti zvaisazoita.
Jose Ramon Gomez akadaro
Ini handidi kuunza matambudziko mazhinji uye isu takanaka Linux sezvazviri ndanga ndichizvishandisa kubvira 1989 uye handirangariri kwaziso dzemawindo
Pindura kuna Jose Ramon Gomez
Vashandisi veLinux vacharamba vachishandisa GNU / Linux, Debian uye Mint naKali pane yangu ingangoita. Uye Windows inogona kuseri kweWinDOS yako ne linux kernel. Ini handidi kuwira mumambure iwayo.
Kune kusaziva kwakawanda mumunhu akanyora iyi blog post.
Clickbait padanho repamusoro.
Zvisinei, ndarwadziwa kuti ndatambisa nguva yangu kuverenga iyi "ruzivo"
Bill Gate akatozviita naSteve Job, uye zvino ave kuda kuzviita neLinux, hazvizo shanduke, paanozviona aine tambo muhuro make anonamira kune yatinoti inodya nyika. Imwe neimwe kumba uye Linux kune wese munhu.
1989? ndimi muvambi
Vashandisi veLinux vacharamba vachishandisa GNU / Linux, Debian uye Mint naKali mune yangu. Uye Windows inogona kuseri kweWinDOS yako ne linux kernel. Ini handidi kuwira mumambure iwayo.
Hongu, zvirokwazvo ndiyo yakanakisa kutambisa nguva nekombuta, ndinobvuma. Iwe uri yakawanda nguva yekutamba nehurongwa, uchigadzirisa uye uchichinja zvinhu zvevaraidzo pane kuita chimwe chinhu nemapurogiramu ako.
Haizove GNU / Linux asi Win / Linux uye isu tichakurumidza kushandisa GNU / Hurd, vese vanofara
Iyi posvo haina kunyatso ziviswa. Ndokumbira kuti uongororezve (WSL).
Mhinduro chaiyo kwazvo.
microsoft HAIYO SHAMWARI yePENGUIN uye nekukurumidza painogona kukwidza tembiricha nekuikanda mugungwa.
Ini ndinofunga zvingave zvakanaka !! Kana Microsoft ikaita izvozvo, zvinoreva kuti madhiraivha ese ane kodzero, software inokosheswa yehunyanzvi (Autocad kana suite yeAdobe), nemitambo yeAAA zvese zvinowirirana neLinux. Izvo zvaizobatsira vashandisi venguva dzose distros
Ini handifunge kuti zvinoitika pa "tafura" ... Pamwe kuisa pamwechete mutsva mutsara wemaseva nekuti vari kudya mbiriso yako. Hongu, zvakanaka kuti munhu wese ade azure asi vese maroja vanouya nemidziyo yavo nemidziyo.
Wese munhu anotaura nezve ecosystem uye ini ndinofunga kuti kuvaka nyowani kubva kune kernel kwakaomarara, kwete nehunyanzvi chete. Kana nekuuya kwemidziyo mitsva havaigona kunyudza meno avo mukuve nezvose. Uye nemidziyo "yechinyakare", handifunge kuti vachasiya yavo yazvino payi mune chimwe chinhu chingadai chisina kugamuchirwa kukuru tichifunga kushora kwekuchinja kweanopfuura makumi mashanu muzana evashandisi veWindows varipo.
Ndinoda mutambo wepinball paGNU / Linux
Huye ... hazvina kushata zvese… panotova nezvakawanda software yekudyara uye mabhurumu anomhanya paLinux, uye kunze kwekunge iwe uchishandisa FSF inogamuchirwa distro iwe hauna chitadzo. Zvino kana Microchof ikachinjira kuLinux kernel, ndinofungidzira kuti vanozoitora, voitora, vobva vaiburitsa chete yavo dzakasiyana "Linux distros", vachisiya iyo Torvald kernel munzira yayo. Chinhu chakashata ndechekuti vanobavha vanozotakurawo kuenda kuLinux uye isu tinotanga kuve nemavirusi uye shits dzakasiyana siyana, kunyangwe tichitenda kunharaunda, sezvazvakagara zvichiitika, maburi akawanikwa anogara akavharwa nenyaya yezuva kana maviri. Kana iri software uye madhiraivha, Linux yaizobatsirwa nekuve nemireza yeiyo proprietary software, uye vatyairi vanobva kuNvidia nevamwe. Kazhinji chichava chinhu chakanaka, kunyangwe chiri chokwadi kuti mamwe ma distros anodonha, makuru acho anoenderera seasina, uye fsf distros icharamba iripo nekuti pachagara paine purist.
Sekutaura kunoita "kana iwe usingakwanise kukunda muvengi wako ubatane naye." Uye izvi ndizvo zviri kuitwa neMicrosoft, izvo zvandisingafunge kuti zvinobatsira Linux; sezvo matambudziko anogara aine Windows anopedzisira ave kutama.
Nuances sezvazviri mune zvese. Makomborero uye zvinokanganisa zvese zviri zviviri, kunyange zvichinyanyisa muLinux. Ini ndinofunga kuti MS pachinzvimbo chekurwa, inoda kutora mukana wekuti yemahara software haina kuisa chero asi kune chimwe chinhu senge android uye google kuidya. Unoishandisa, unoishandura kune zvaunoda, saka kana iwe ukaisa makiyi nemaplas! Mibairo ine mari shoma. Ndiani anoti havapedzisi vagadzire zvakashata distro, chete nemarogo avo uye nezvivakwa zvikamu. Iko kune Red Hat, ichiita bhizinesi. Iyo yakaregeredza mari uye kukura kweprojekiti, asi kwete nekuti yaive yakanaka, asi nekuti yaigona kushandiswa. Iko kune google seye investor mukurusa mu firefox. Kana avo vanoshandisa waini sehwaro hwemabasa avo (ini handitaure mazita), asi pachokwadi mumwe haatombo govana nekuvandudza.
Kubatsira kukuru ndekwekuti yaizomanikidza makambani kuti ave nekuenderana kukuru nekernel uye izvo zvakanaka, asi pamwe zvaizodonhedza mapurojekiti mazhinji asingakwanise kukwikwidza. Zvakaoma kuongorora izvozvo. Ikoko kwaizove zvakare nemusika mudiki kune MS kune angangoita akasarudzika linux nzvimbo senge makomputa. Kana kuti ndaizorega Linux ichiramba ichipinda munzvimbo idzo Windows dzaisagona, senge Internet yezvinhu, sainzi uye nekutsvagisa mafungu mairi yakasimba uye ichikura.
Ini ndinofunga ndipo panoenda zano. Iyi yemahara uye yemahara inotora mukana wayo uye kuba musika uyo unongova we linux pane kubiwa kubva kwauri.
Pakupedzisira ini ndinofunga zvinogona kukuvadza kupfuura kubatsira.
Mune maonero angu ekuzvininipisa, Microsoft iri kutsvaga mubatanidzwa wenhema uye kubvisa makwikwi ayo makuru kubva mukati, linux haidi microsoft asi microsoft inoda linux, kubvira 2005 ini handishandisi windows kana chero chinhu kubva ku microsoft kungave pachako kana kubasa.
Pindura kuna Diablillolinux
Mazhinji makomendi kubva kune asingazivikanwe, Microsoft yaive imwe yemakambani ekutanga kushambadzira Unix neMicrosoft Xenix yakaburitswa muna 1980, dombo rekutanga reUnix riri mumaoko aLinus torvalds rakaburitswa muna 1991 uye raingova muKernel chete. Microsoft mupfungwa iyoyo iri padyo neLinux pane Linux pachayo. kunyangwe zvikaita sekupenga. https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_XENIX
Kana ivo "vakatora" iyo linux kernel sezvazviri, uye windows inochinjika pairi neiyo kwayo "uzivi", vatyairi vakanaka uye zvinehunyanzvi zvinoshandiswa kune wese munhu. asi kana vakaita imwe yepakati rukoko kana api, kuchinjira kune kernel, zvirokwazvo vatyairi uye zvinoshandiswa nemawindows matsva zvinongoshanda chete newaya mahwindo kunyangwe ine linux kernel yakawanda sei.
Ini ndinofunga vari kuvhiringidza WSL 2.0 iyo inosanganisa iyo Linux Kernel painovhura yemuno Ubuntu mukati me windows 10, WSL 2.0 inofambira mberi kwakakura mune izvi sezvo isiri yekufungidzira senge WSL 1. (Windows subsitem ye linux). Ini ndinogona kutoshandisa Ubuntu kubatanidzwa muWindows 10 neWSL 1 uye zvomenemene kunyange kuisa XServer (Xfree) uye kumhanya Nautilus neXserver seXming
Dj firehouse akadaro
Isu tese tinoziva kuti Linux yakagara iri "isina basa" inoshanda sisitimu asi panogara paine matambudziko ekugadziriswa, sezvo Windows yakagara iine matambudziko ehurongwa maererano nekernel, zvakanyanya seMac iyo yachinja musika asi Windows yakawanda inozivikanwa Kusvika pamusika, software makambani anosarudza Windows kuMac nekuti ivo vanozivikanwa. Pfungwa ndeyekutengesa, kutengesa uye kutengesa uye kuhwina uye kuhwina, zvinova ndizvo zvinoda kambani kufambira mberi pasina matambudziko akaita seUbuntu, izvo kwandiri zvisina basa, mune yangu windows xp uye windows 7 yekupedzisira, inova ndiyo inonyanya kushanda system yakatsiga uye yakavimbika kune ese desktop uye kukwazisa wega.
Pindura kuna Dj.firehouse
Mauricio Jaime Baquero akadaro
Haizove kernel kuvhunduka inosheedza basa rekuvhunduka.c, asi kernel64.sys ichifonera panic.bin uye ine inozivikanwa nebhuruu kumashure.
Pindura Mauricio Jaime Baquero
LI Ariel Gonzalez akadaro
Mune maonero angu, inhau dzakanaka kuti Windows, sisitimu inozivikanwa uye inoshandiswa ne70% yevashandisi seNucleo kuLinux, izvo zvinonakidza, nhasi chingave chiri chechokwadi chirongwa chekushandisa. Makorokoto kuMicrosoft nesarudzo yayo yehungwaru uye kuLinux nekugamuchirwa kwayo, izvozvi tinotarisira kugova uku. Zvichakadaro ini ndinopfuurira ne KDE Linux.
Pindura LI Ariel Gonzalez
Zvinogona kuitwa neMicrosoft kuchengeta iyo Windows NT kernel uye kuisa Linux mumasisitimu enharaunda, semuchina chaiwo.
Pindura Felipe Gutierrez
Ndinozviona zvakaoma, nekuda kwezvikonzero zviviri zvikuru:
1-. iyo marezinesi:
Ngatirangarirei chokwadi chekuti Linux inoburitswa pasi peGNU rezinesi uye izvi zvinogona kumanikidza Windows vhezheni neLinux kuti ive yakavhurwa sosi.
piri-. technical zvikonzero: chokwadi chekuchinja kernel uye kuenderana nezviripo mashandisirwo zvakanyanyisa kuoma, ngatirambei tichifunga kuti windows isisitimu ine hupfumi mukushandisa, maraibhurari, madhiraivha, nezvimwe. uye kuisa zvese izvo kune linux kernel kwakanyanya kuomarara, ivo vanofanirwa kugadzira chirongwa chinoteedzera windows windows mu linux
Ini handinzwisise kuti dambudziko ringave rei. Ndeapi matambudziko akaunzwa neGoogle neApple?
Uye zvinoita sezvisina musoro kwandiri kuti mubatanidzwa wakaita seMS unotora sosi yakavhurika muzvirongwa zvayo. Izvo zvavanofarira kusatengesa software, ivo vanofarira kutengesa masevhisi.
John Walker akadaro
Zvingave zvakanaka kune vashandisi veMS. Provavelmente MS ingashandise kernel yakagadziridzwa, zvakare senge fizeram com kana Edge (yakagadziridzwa chromium), ichiti pakupedzisira hauna bhurawuza? Ini handina kufunga kuti isso inokuvadza iyo Linux distros, mashoma kana iyo Linux kernel.
Pindura Jhon Walker
BEEDELL ROKE JULIAN LOCKHART akadaro
Zviripachena, izvi zvinosuruvarisa kuti hazvisi zvechokwadi.
Pindura kuna BEEDELL ROKE JULIAN LOCKHART